enagrikkhabar – My WordPress Blog
सामान्यतः उत्तेजित अवस्थामा लिंगको सालाखाला लम्बाइ यस्तै १५ सेन्टिमिटर हुन्छ। धेरैजसो व्यक्तिको लिङ्गको लम्बाइ १३ देखि १६ दशमलव ५ सेन्टिमिटरभित्र परे पनि यस्तै ७ प्रतिशतजति व्यक्तिको लिङ्ग ११ सेमीको हाराहारीमा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। यदी साँच्ची नै तपाईं लिङगको आकार सानो हो र बढाउन चाहनु हुन्छ भने तलका स्टेप अपनाउन सक्नु हुन्छ
१. कसरत तथा हातैले तन्काउने विधिः दैनिक रूपमा पर्याप्त समय लिङ्ग-दोहन (दुहुने) जस्तो गरी तन्काउने गरिएमा लिङ्गको नाप बढ्ने कुराको दाबी गरिएको छ।
२. तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि ः कुनै वजनदार वस्तु लिङ्गमा झुन्डयाई वा screw-extender भएको यन्त्रले लिङ्गको साइज बढाउन सकिन्छ।कतिपयले यस्ता विधिले अनावश्यक रुपमा लिङ्गमा चोटपुग्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
३. पम्प प्रयोग गर्ने विधिः दबाब कम गर्ने पम्प प्रयोग गरी लिङ्गमा रक्त प्रवाह बढाउने विधिले अन्य समयमा भन्दा लिङ्गको उत्तेजना कडा र बढी हुने दाबी गरिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा त प्रश्न छँदैछ, ठीकसँग प्रयोग गर्न नजानिए लिङ्गमा चोट पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
४. शल्यक्रियाः यो विधिमा लिङ्गलाई अडयाउने तन्तु (suspensary ligament) काट्ने, बोसो (fat) तन्तु भर्ने वा graft गर्ने वा अन्य वस्तु राख्ने (प्रत्यारोपण) गर्नेजस्ता अनेक उपाय गरिन्छ। यस्तो शल्यक्रिया कुशल चिकित्सकवाट गरिनु आवश्यक छ। यसका बाबजुद कतिपय स्थितिमा शल्यक्रिया गराउने व्यक्तिको आशाअनुरूप नतिजा नआएको कुरा पनि छ, जसले असन्तोषलाई थप्छ नै।
मायालाई टेक्सीमा चढाएर म अर्को टेक्सी लिएर धापासी घर हिंडे । घर पुगेर मैले डोरवेल बजाएँ, मायाले ढोका खोली, आम्मै माया त क्या सेक्सी ड्रेसमा थिई । मायाको शरीरमा सानो स्कर्ट र स्लीवलेस लो-कट ट्युब टि-शर्ट थियो । टि-शर्टबाट उसका पोकाको आधा भाग बाहिरै देखिन्थ्यो साथै दुधका निपल अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । एकछिन त म मायालाई हेरेको हेर्*यै भएँ, मेरो लाँडोले आफ्नो बिभत्स आकार ग्रहण गर्न खोज्दैथ्यो । एक मनले त मायालाई ढोकामै आड लगाएर चिक्न सुरु गरौं जस्तो पनि भयो । मायाले हालत बुझिसकेकी थिई, कुटील मुस्कानका साथ “भित्र छिर्ने होइन?” भनेपछी म “खै त बुबा?” भन्दै भित्र छिरें । “बुबा त बिहानमात्र मार्केटिङको सिलसिलामा बुटवल जानु भा’को छ एक हप्ताको लागि ।“ “खुब हट भएर बसेकी छेस् त केटी!” “म त्यस्तो हट देखिन्छु र भन्या? आऽऽऽ…. घरमा बस्दा लुज र सजिलो कपडा लगाउँ भनेर नि…” म झोला लिभिङ रुमको कार्पेटमाथि राख्दै सोफामा सुस्ताए झण्डै तिनदिनको चिकाइको थकान त्यसमाथि गए रातभरीको चिकाईको थकानले केही गलेको पनि थियो ज्यान । माया जुस लिएर आउँछु भन्दै किचनतिर गई, किचनतिर जाँदा मायाले यति मजाले चाक हल्लाउदै गई कि मलाई यस्तो लाग्थ्यो ऊ मोडेलिङ गरिरहेकी छे या मलाई चिक्नको लागि निमन्त्रणा दिदैछे “दाई मलाई समाएर यही भुइमा सुताएर चिक्नुस…।“ मेरो लाँडो मस्तले फूलेर ठन्किसकेको थियो र बाहिर निस्कन आतुर भइसकेको थियो । मायाले जुस ल्याएर मेरो अगाडी दिदै भनि “दाई… जुस लिनुस् ।“ उसका आँखा मेरो लाँडोमाथि केन्द्रित थिए । मैले जुस पिएपछी गिलास मायाले मागी अनि फेरी चाक मट्काउँदै किचनतिर गई ।
केहिबेरमा फलफुलका काटिएका टुक्राहरु लिएर मेरो अगाडी आइपुगि र टि-टेबलमा प्लेट राख्दै मेरो सामुन्नेको सोफामा ऊ बसी, बस्ने बेलामा उसको स्कर्ट हावाले उडाएझै गरि हल्लियो र उसको कमरदेखि मुनिको सम्पूर्ण भाग मेरो आँखामा पर्*यो । वाफ रे उसले त पेन्टी नै नलगाएकी रहिछे । उसको स्कर्टबाट कमरमुनिको अंग छोपिदैन थियो, अर्थात् मायाको पुती हल्कासँग मेरो आँखा अगाडी थियो । म फलफूल खान थालें, माया पनि एक-दुई टुक्रा खाएझैं गर्दै थिई । अझ अंगुरका दाना जिब्रोमा लिएर जिब्रो घुमाउँदै सेक्सी पारामा खान्थी । उसले फलफुलका टुक्रा टिपेर सोझिने बेलामा उसको पुती अलि प्रष्टसँग देखिन्थ्यो, चिल्लो सफाचट पुतीमा उसले मेकअप गरेकी थिई । निकैबेर सम्म मेरो आँखा त्यहा पाएपछी मायाले सोधी “के हेर्नुभएको त्यसरी… एकोहोरो भएर…” मेरो मुखबाट स्वाट्टै निस्क्यो “स्कर्टबाट तेरो पुती देखिरा’छ…!” उसले आफ्नो अनुहारको हाउभाउ बिस्मित बनाइ र भनी “कहिल्यै नदेख्या झैं गरि के हेरिरा’त… अरुको भएपनि हुनु आफ्नै बहिनीको?” “देख्न त धेरैकै देखेको छु नि… तर मेकअप गरेको पुती फर्स्ट-टाइमा देख्दैछु…” “छ्या! एक्लै भएको मौका पारेर मान्छेले आफ्नो दिदी-बहिनी पनि नभन्दा रैछन्…” अनि हातले स्कर्टलाई तल च्यापेझैं गरि । “दिदी-बहिनीहरु यसरी हट भएर दाई-भाईको अगाडी नाङ्गिन्छन् त के गरुन्…! हेर न मेरो भाई त उठेर… भित्र छिर्छु भन्दैछ…” मलाई थाहा थियो उसलाई चिक्नु कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन खाली कुरा सुरु गर्नु गाह्रो हो, त्यो पनि सिधै मैले सुरु गरेपछी कुनै बाधा बन्धन् पनि थिएन । अनि मैले जिन्समा ठन्किएको लाँडोलाई मुसार्दै उसको ध्यानाकर्षण गरें “माया खै एकपटक डिटेलमा हेर्छु नि?” अनि उसको स्कर्ट माथि सारेर उसलाई सोफामा सुताइदिएं । उसले नाइनास्ती गरेझैं गरेर भनि “नाई दाई! हामी त दाजु बहिनी पो हो त?” मैले उसको पुतीको ओंठ वरपर हल्कासँग औंला खेलाउँदै भनें “एकछिन बिर्सी दे न म तेरो दाई हो भनेर! सम्झी कि म तेरो ब्वायफ्रेण्ड हुँ…?” अनि चोर औंला उसको पुतीमा छिराईदिएँ ।
मायाले हल्कासँग सित्कार भरिएको आवाज निकाली । मैले औंलालाई भित्र बाहिर गराउन थालें र क्रमिक रुपमा गति बढाउँदै भने “एकछिन आफूलाई वैंशालु तरुनी सम्झी सक्छेस् भने भालु सम्झी न…” “छि आफ्नै बहिनीलाई भालु भन्ने… छोड्नुस्…” तर उसले आफूलाई छुट्टीन खोजेको कुनै हाउभाउ नै प्रदर्शन गरिन । मैले कानमा खुसुक्क भनें “बुबाको भन्दा त मोटो र ठूलो छ मेरो लाँडो!” ऊ बुरुक्क उफ्रदै भनि “के अरे…?” मैले जिन्सको बटन खोलेर लाँडो निकाल्दै भनें “साँच्चै भनेको बुबाको भन्दा मेरो लाँडो ठूलो र मोटो पनि छ… नपत्याए यी हेर् न?” “छि कस्तो लाज नभा’को बुबाको कत्रो छ मलाई के थाहा?” “त्यो त पुतीमा छिराएपछी थाहा हुन्छ नि? मलाई थाहा छ घरमा बुबा र रिकल अंकलसँग तैले दिनदिनै चिकाउँछेस् । आज मेरो लाँडो पनि छिराएर चिकाई तलाई मजा नै हुन्छ । मलाई चिक्न नदिने भए किन यस्तो सेक्सी लुगा लाएर बसेकी छेस् त ?” अनि उसको पोकाबाट समिज हटाएर पोका खेलाउँन थालें ।
“सबै थाहा रै’छ त? किन ढिलो गर्नुहुन्छ… “ अनि मेरो लाँडो हातमा लिएर खेलाउन थाली । “साँच्चीकै ठूलो छ…. खुब मजा आउछँ ।“ अनि घुँडा टेकेर भुईमा बसेर मेरो लाँडो लोलीपप झैं चुस्न सुरु गरी । “कसरी थाहा पाउनुभयो दाई… म घरकै रण्डी भा’छु भनेर…” “तेरो कम्प्युटरमा भएको सबै भिडियो हेरिसकें नि त मैले!” “दाई भएर बहिनीको व्यक्तिगत चियो गर्ने… सबै दाईहरु बहिनीलाई कसरी चिक्ने भनेर मौका खोजिरा’ हुन्छन् कि क्या हो?” “सबै दाईहरु त हैन … तँ जस्ता सेक्सी बहिनीका दाईहरु चाँहि हुन्छन्!” मैले उसको टाउको समाएर लाँडोलाई उसको मुखमा भित्रसम्म छिराउने कोशिस गरें, उसले पनि मेरो त्यो प्रयासलाई सहयोग गरि… गलप गलप गर्दै निकै पटक मैले लाँडो उसको गला सम्म पुर्*याएँ । “ल धेरै चुसिस् मेरो लाँडो अब म तेरो पुती चाटिदिन्छु ।“ माया हत्तपत्त पुती फट्याएर सोफामा बसी म घुँडा टेकेर भुईमा बस्दै उसको पुतीमा जिब्रोले खेलाउन थालें । मायाले यति चर्कोसँग सेक्सी आवाज निकाली कि त्यो आवाज सुन्ने जो कोही पनि सनक्क सन्केर चिक्न लालायित हुन्थ्यो । निकैबेर उसको पुती चाटेपछि मैले मायालाई भनें “ओई पुतौरी बैनी पुती थाप् अब म तँलाई चिक्छु ।“ “चिक्नु न त! कसले रोकेको छ र?” मैले ठन्केको लाँडो हातले समाउँदै उसको पुतीको ओंठमा तेर्साएँ र विस्तारै उसको पुतीभित्र टुप्पोमात्र छिराँए । उसले लामो सित्कार दिई, त्यसपछी मैले हल्कासँग पुरै लाँडो उसको पुतीभित्र छिराएँ । मायाले सित्कारको स्वर झनै चर्को बनाई । मैले दनादन लाँडोले धक्कामाथि धक्का दिन थालें । “आहऽऽऽ… दाईऽऽऽ…. अझै भित्र छिराउनुस्… पेल्नुस् तपाईको मुसलऽऽऽ… मेरो पुतीमा… आहऽऽऽ… आहऽऽऽ…. गेडैसित छिराउनुस्… आहऽऽऽ…” माया तलबाट चाक उचालेर मेरो साथ दिइरहेकी थिई । निकैबेर चिकेपछी मैले लाँडो बाहिर निकालें “के भयो… चिक्नु न?” “मैले हाँफ्दै भनें “थकाई लाग्यो…” उसले फेरी मेरो लाँडो मुखमा राखेर चुस्न थाली । यस्तो लाग्थ्यो ऊ कुनै ब्लु-फिल्मको हिरोइन भन्दा कम छैन । केहिबेर लाँडो चुसेपछी मायाले भनि “तपाई सोफामा बस्नुस् बाँकि काम म गर्छु…” अनि म सोफामा बसें ऊ मेरो काखमा पुती फेस्याएर छिराउन आई र आफैं मच्चिन थाली ।
म उसको पोका समाएर उसलाई सघाउन थालें । निकैबेर म माथि मच्चिएपछी माया मेरो काखबाट उठी र सोफाको साईडमा हात टेकेर उभिई र मलाई चाकतिरबाट पुती देखाउँदै भनि “अब डोगी स्टाईलमा…” मैले पनि उसको कमरमा दुबै हातले समाएर लाँडो उसको पुतीमा सोझ्याँए र फेरी चिक्न थालें । चिक्दाचिक्दै उसले एउटा खुट्टा सोफामा टेकाई जसले गर्दा मलाई चिक्न झनै सजिलो भयो, घरिघरि म उसको पोका पनि समाएर उसमा चिकाईको आनन्द उत्कर्ष सीमामा पुर्*याईदिन्थे ।मायाले खुट्टा सोफामा टेकाएपछी मेरो नजर उसको चाकको प्वालमा पर्*यो । यसो हेर्दा भर्जिन नै छ जस्तो लाग्यो, मैले चोर औंलाले उसको चाकको प्वाललाई बाहिरैबाट खेलाउँदै भनें “के हो चिकुवाई चाक त भर्जिन छ जस्तो छ नि?” “पुतीको सिल त ड्याडीले चिकेर उद्*घाटन गर्नुभयो, रिकल अंकलले चाकलाई ताकेता गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तपाईको लागि भनेर साँचेको… जतिखेर मन लाग्छ छिराउनुस् मेरो चाकमा…” “शुभ काममा ढीला किन? अहिल्यै चिक्छु तेरो चाकमा….” अनि मैले उसको चाकमा मुखभरी थुक बनाएर खसाले र औंलाले दल्दै उसको चाकको भित्र सम्म चिप्लो बनाउन थालें । तिनचार पटकसम्म तेसो गरेपछी मैले उसको पुतीबाट लाँडो बाहिर निकालें र उसको चाकमा सोझ्याए । मायाले मलाई अनुनय गरि “दाई ! अलि विस्तारै है फर्स्टटाईम हो…” “तेस्को टेन्सन् नलिई न म तेरो चाकलाई माया गरेर चिक्छु… सबै कुरा त फर्स्टटाईम हुन्छ… तेरो पुतीमा पनि त बुबाले फर्स्टटाईम चिक्दा अलि दुःख त भएको थियो नि त ? चाकमा चिक्दा १-२ दिन अलि गाह्रो हुन्छ तेत्ती हो…” अनि मायाले दुवै पुठ्ठामा हातले समाएर चाक फट्याउन थाली, मैले लाँडोको टुप्पो अलिकति उसको चाकको प्वालमा छिराएँ “आईऽऽऽया….. दादा तेल लगाएर गर्नु न…?” “साले भालु… तेल लगाएर त जसले पनि चिकाउँछ नि… म त थुक लगाएर चिक्छु तेरो चाकमा…” “छि दादा… म अब बजारकी भालु भए हैन त… जब भालु नै भन्नुहुन्छ भने चिक्नुस् जसरी मन लाग्छ तेसरी चिक्नुस्… आजसम्म म घरकी रण्डी थिएं आफ्नै दाईले भालु भनेपछी अब म बाटोमा जसको लाँडो भेट्यो तेसैसँग चिकाउँछु….” “साले भालु… तलाँई कसले सार्वजनिक भालु भनेको छ र… तँ त मेरो पर्सनल भालु पो त ? तलाँई चाही म जहाँ मन लाग्यो तेहाँ चिक्छु पो भनेको त?” अनि उसको चाकमा पुरै लाँडो भित्र छिराईदिंए । उसले घरै थर्किने गरि चिच्याई “अईया.. मेरो चाक छिया छिया भयो अलि विस्तारै गर्नु न… पोल्न थाल्यो के…” मुखभरिको थुक उसको चाकमा थुकेर मैले फेरी उसको चाकलाई लेस्याइलो बनाएँ र धमाधम लाँडो उसको चाकमा पेल्न थालें ।
मायाको आँखाबाट आशुनै झरिरहेको थियो, मैले दया नगरिकन उसको चाकमा चिकिरहेको थिएं, उमाथि दया गर्न थालेको भए म उसको चाकमा चिक्न असफल नै हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई थियो । उसको पीडानै मेरो आनन्दको अनुभुति बढाइरहेको थियो । जब मेरो लाँडोले उसको चाकभित्रै सम्पूर्ण फुसी झार्*यो तबमात्र मैले उसको चाकबाट लाँडो बाहिर निकालें । यो पीडामा मायाको आँखामा लगाईएको गाजल लतपतिएर आँखाको वरिपरी दलिएको थियो र उसको अनुहार कुनै युद्ध जितेर आएको मानिस सरह विजयीभावमा दङ्ग थियो । “साँच्चै मजा भयो है केटी?” “हुन्छ कहीं नपाएर… यी लोग्ने मान्छेहरु अर्काको मनोभावना त बुझ्नै नचाहने…” मैले उसको चाकको पुठ्ठा च्याप्प समाएर अठ्याउँदै भनें “त्यो बुझ्न थाले त यस्तो रमाईलो कहाँ हुन्छ र…?” अनि ऐनातर्फ उसको चाक फर्काएर देखाउँदै भनें “बल्ल त तँ प्योर भालु भइस्… बाउ र दाईको लाँडोले चिकाउने घरेलु भालु…!” उसले मेरो छातीमा आफ्नो अनुहार टसाँउदै मेरो दुधको मुन्टामा किस गर्दै भनि “दाईको लागि त म जे पनि गर्न तयार छु” अनि मेरो लाँडो खेलाउन सुरु गरि ।
उसको हत्केलाको स्पर्शले मेरो सुप्त लाँडो फेरी ठन्किन थाल्यो, मायाले मलाई अनुनय गर्दै भनि “यो पाली पुतीमा चिक्नुस् है चाक त भतभती पोलीरहेको छ । बरु पुतीमा जतिपटक चिक्नु मन लाग्छ तेतीपटक चिक्नुस्… म बेहोस हुनेगरि पुती थाप्छु बरु” “धेरै नाटक नगर… चिक्दै जाँदा लाँडो जता पनि छिर्न सक्छ… लाँडोको काम चिक्नु हो चाहे त्यो चाक होस् चाहे पुती… फेरी तँ त यति सेक्सी रण्डी छेस् कि तलाई जसरी चिकेपनि मजा हुन्छ…” “साँच्ची..!!! कम्तीमा म त्यो लायक त रैछु… जताबाट चिकेपनि मजा दिन सक्ने…!!! मलाई कुनै पछुतो छैन तपाईजस्तो दाईसँग चिकाउन… चिक्नुस् चाकमै चिक्ने भएपनि चिक्नुस्… जे त पर्छ… हदै भए हस्पिटल नै पुग्नुपर्ला हैन त ?” “नचाहिने कुरा गर्छे… चाकमा चिकेर तरुनी मरेको खबर आजसम्म सुनेकी छेस्… वाहियात्…” अनि उसको मुखमा मुख जोडेर डिप टङ्किस दिन सुरु गरें । उसलाई किस गर्दा मेरो हातले घरि उसका पुठ्ठा जोडले निचोर्थे घरि उसका पोका । माया पनि एकोहोरो मेरो लाँडो खेलाईरहेकी थिई ।
निकैबेरको किस तोडेर मैले मायालाई आँखाको इशाराले लाँडो देखाँए, आखिर बहिनी भएपनि चिकाउनमा ऊ पोख्त थिई, आशय बुझ्नासाथ घुँडा टेकेर मेरो लाँडोलाई स्वाट्टै मुखमा हालेर चुस्न सुरु गरि । केहिबेर उसलाई लाँडो चुस्न दिएपछी मैले पनि उसको पुती फट्याएर चाट्न सुरु गरें उसको पुती निकै रसिलो भइसकेको थियो । घरिघरि म उसको पुतीको टुस्स निस्केको भागलाई दाँतको बिचमा राखेर हल्का टोकेझैं गरिदिन्थें । निकैबेर उसको पुतीमा भुलेपछी मैले लाँडो उसको पुतीमा छिराएर भनें “ल केटी आज तैंले दाईलाई खुशी पारिस्… तैंले जे भन्छेस् म मान्न तयार छु… ल भन् के भन्छेस्… “ “ह्याऽऽऽ… अहिले खुरुखुरु चिक्नु न ! चिक्ने बेलामा के को गन्थन् गर्नु भा… भन्ने बेलामा म भनिहाल्छु नि… पैला चिकेर मेरो अनुहार सेतो त बनाउनुस्… मलाई सेल्फी लिनु छ…” त्यसपछी म उसको पुतीमाथि मच्चिन थालें, बहिनी मलाई तलबाट चाक उचालेर साथ दिइरहेकी थिई, चिकाईको क्रममा मायाले मुखबाट सित्कार पनि जोडतोडका साथ निकालिरहेकी थिई ““आहऽऽऽ… दाईऽऽऽ…. अझै भित्र छिराउनुस्… पेल्नुस् तपाईको लाँडोऽऽऽ… च्यात्नुस् मेरो पुती… आहऽऽऽ… आहऽऽऽ…. पुरै छिराउनुस्… आहऽऽऽ… मेरो चिकुवा दाईऽऽऽ… चिक्नुस् यो रण्डी बैनीलाई… जताबाट मन लाग्छ तेतैबाट चिक्नुस्… आहऽऽऽ… मेरो सम्पूर्ण ज्यान तपाईकै भयो… ” उसको पुतीमा मच्चिदाँ मच्चिदैं मैले लाँडो पुतीबाट झिकेर पूनः चाकको प्वालमा सेट गरें अनि धमाधम धक्का पेल्न थालें “च्यात्नुस् मेरो चाक… च्यात्नुस्… म तपाईकै रण्डी हो… भालु हो… जे सोचेर चिक्नु छ चिक्नुस् … तपैंको लाँडोले चिकाउन त म मेरो सारा जिन्दगी सुम्पिन सक्छु… चिक्नुस् अझै बेसरी पेल्नुस् चाकमा परे अस्पताल जाउँला… भन्दिन्छु आफ्नै दाईको ठूलो लाँडो देखेर मन थामेन चाकमा चिकाउन लाग्दा च्यातियो…” “नकचरी धेरै नकरा चिकि त रा’छु नि… तलाई हस्पिटल लगे मैले कसको चाकमा चिक्नु नि… ल बरु लाँडो चुस् एकछिन्…” हत्तपत्त माया छुट्टिएर मेरो लाँडो मुखमा राखेर चुस्न थाली, एकछिन चुसेपछी मैले पूनः उसको चाकमा चिक्न सुरु गरें, माया हर तरहको बोली निकालेर मलाई मजा र साथ दिइरहेकी थिई, म घरि चाक घरि पुती गर्दै उसलाई चिकिरहेको थिएँ । निकैबेरको त्यो क्रमपछी मैले मायालाई भनें “सेल्फी लिन्छु भनेकि होइनस् ल तयार भई…” मायाले हत्तपत्त मेरो मोबाईल अन गरेर फोटो लिन थाली ।
उसको मुखमा लाँडो तेर्साएर छोल्दा देखि उसको मुखमा हानेको पिचकारी लगायत सबै एकसेएक गरि फोटो पनि खिची । उसको निधार, सिउँदो, नाक, गाला, ओंठमा झरेको फुसी बग्दै चिउँडोसम्म पुगेको थियो । मायाले मेरो लाँडो फेरी मुखमा राखेर रहेलपहेल फुसी पनि चुसी । त्यसपछी उठेर मलाई अँगाल्दै पूनः फोटो खिच्न थाली उसको मुख सेतै थियो तर घरि उसको पोका म समाउँथे, घरि दुवै पोका समाउँथे । अन्तमा उसले मलाई भनि “अघि मलाई मन लागेको कुरा भन् भन्नु भा’हैन…” “हो…!” “त्यसोभे मलाई किस गर्नुस्… जस्ताको तेस्तै हालतमा… पोका निचोर्दै नि फेरी…” मैले भनें “मेरो लाँडोले चिकेको तेरो पुती चाटिसकें, मेरो फुसी चाखेको तेरो ओंठमा किस गरिसकें तेरो चाकमा चिकेर तेरो मुखमा पनि लाँडो छिराइसके अनि तेही मुखमा किस पनि गरिसकें भने अब के बाँकि छ र आफ्नो लाँडोबाट निस्केको फुसीमाथि किस गर्न के को लाज…” अनि उसको फुसी सहितको ओंठमा किस गर्दै सबै फुसी मुखमा लिएं र विस्तारै सक्दो फुसी आफ्नो मुखमा जम्मा गरेर उसको अनुहार सफा बनाएपछी उसको ओंठमा ओंठ जोडेर टङ किस हानें अनि फुसी घरि मायाको मुखमा घरि आफ्नो मुखमा साटासाट गरें, सँगै उसका पुट्ट परेका चिक्दा चिक्दै कडा भएका पोका पनि जोड जोडले निचोर्दै अन्तमा मायाको मुखमा फुसी छोडेर भनें “मलाई वाइल्ड फकिङ इन्टेरेष्टिङ लाग्छ केटी…” अनि मायालाई बोकेर किचनमा पुर्*याएर भुँईमा बस्न लगाएर उसको ज्यानमा लाँडो तेसारेर धरररर मुत्न थालें । उसको शरिर जे होस् मजाले मेरो पिशाबमा लतपत भयो, अनि भुँईमा जमेको पिशाबमाथि पल्टाएर पूनः उसलाई किस गर्दै लडिबुडी गरिरहें ।
काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक आवश्यकता अनुरुप एमाले र माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच एकीकरणको पहल सुरु भएको बताएका छन्।
चुनावी तालमेल र पार्टी एकिकरणका विषयमा जानकारी दिन तीन दलले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता ओलीले भने, ‘चुनावले पनि नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसारको सुपरिणाम दिन सकोस् भनेर पनि हामी एकताको बाटोमा आएका हौं।’
आफूहरुले एकताले देशको सार्भभौम सत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई माथि उठाउन चाहेको बताउँदै लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका निम्ति लडेका सबै शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल सुरु भएको ओलीको भनाइ थियो।
अबको दिनमा देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि ०७४ सालमा देशभक्त वामपन्थीको सरकार बन्ने दाबी समेत गरे।सहमतिमा हस्ताक्षरपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अब साधारण बहुमत ठूलो कुरा होइन। हाम्रो ध्यान दुई तिहाईतिर छ।’
उनले एकताबाट नआत्तिन पनि आग्रह गरे। ‘हाम्रो एकता कसैको विरोधमा छैन, नेपाली जनताको आकांक्षा र नेपालको आवश्यकता हो,’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले भने, ‘माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई लागेको हुनसक्छ, पार्टीले क्रान्तिकारिता छोड्यो कि जुझारुपन छोड्यो कि, एमालेका कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला। तर कसैले केही छोडेको छैन।’
नेपालबाट समाजवादको नयाँ मोडल
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको एकता र चुनावी तालमेल कांग्रेसविरुद्ध लक्षित नभएको दाबी गरेका छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति नेपालबीच चुनावी तालमेल र एकताको प्रक्रिया घोषणाबारे जानकारी दिन राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रिय हित र आवश्यकताका लागि एकता प्रक्रिया सुरु भएकाे बताए।
उनले शान्ति प्रक्रियालगत्तै आफ्नो पार्टीले एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न थालेको पूरा नभए पनि अहिले यो अधुरो काम पूरा हुन लागेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। भने ‘दश बर्ष अगाडि नै यस विषयमा छलफल भएको थियो। कहिलेकाही राजनीतिमा असम्भव भनिएको काम सम्भव हुन्छ र कहिलेकाही सम्भव ठानिएको काम पनि हुँदैन।’
प्रचण्डले एकता ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताबाट प्राप्त भएको बताए। संक्षिप्त मन्तब्यको क्रममा उनले यस्तो चुनावी तालमेल कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरुबीच मात्र नभई लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकामी शक्तिहरुबीच गर्न आफूहरु खुल्ला रहेको बताए। ‘हामी विश्वलाई नयाँ चीज दिन चाहन्छौं’ प्रचण्डले भने,’ हामी नेपालबाट समाजवादको नयाँ मोडल शुरुआत गर्न गैरहेका छौं । यो तालमेल त्यसकौको शुरुआत हो।’
दसगजा आन्दोलनका अगुवा यादव छुटाउन कुनौली पुगे नेपाली अधिकारी
सप्तरी । भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका देवनारायण यादव बाबुछोरालाई छुटाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । सप्तरीका सुरक्षा अधिकारीहरुले विहारको सुपोल जिल्लामा पर्ने कुनौली थाना पुगेर भारतीय अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेका छन् ।
देवका छोराले भारतकी ज्योतीलाई करिव ४ महिना अघि नै भगाएर विवाह गरेका थिए । दशैंको बेलामा ‘अर्केस्ट्रा’ नाच हेर्न शनिबार सीमा पारी गएका बेला देवनारायणका छोरालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई छुटाउन गएका देवनारायणलाई पनि भारतीय प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सप्तरीका सिडिओ भागीरथ पाण्डेलाई यादवका बाबु–छोराको रिहाइको पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रजिअको प्रयास सफल नभए सरकारले उच्चस्तरबाट कूटनीतिक पहल थाल्ने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । ‘भारतको प्रहरी–प्रशासनसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो रिहा गर्न भनेको छु । स्थानीय स्तरबाट नभए सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गर्छ,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मन्दीका कारण छाला निर्यात रोकियो
विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मन्दीका कारण सुनसरी मोरङ कोरिडोरका छाला उद्योगहरुमा करिब १२ करोड रुपैंया बराबरको व्हाइट ब्लु गरिएका छाला थन्किएका छन् । विदेश निर्यातका लागि ठिक्क पारिएका करिब १५ हजार थान भैंसी र ३ लाख थान खसी बाख्राका तयारी छालाहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मन्दीका कारण निर्यात रोकिएको हो ।
विगत केही महिना देखि छालाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मन्दी आएकाले काँचो छालाको मूल्य निकै घटेको छ । गत वर्ष १ हजार ३ सय रुपैया पुगेको भैसीको छालाको मूल्य घटेर १ हजारको हाराहारीमा पुगेको नेपाल लेदर एसोशियसनका सदस्य हसन अन्सारीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मन्दीले गर्दा छालाको मूल्य अत्यधिक घटेपछि उद्योगहरुले उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कटौती गर्न थालेका छन् । यस्तै अवस्था २०६६ सालमा पनि भएको थियो । त्यति बेला भैसीको छालाको मूल्य घटेर साढे ४ सय रुपैयासम्म पुगेको थियो ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट भारत, चीन, इटाली, क्यानडा, दक्षिण कोरिया र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुमा छाला निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट रांगा भैसी, खसी बाख्रा, गाई गोरु र भेडाको छाला निर्यात हुने गर्दछ ।
म हाल ४० वर्षको भए । यो म करिव १५ वर्षको हुँदादेखीको कुरा हो । हामी सपरिवार हेटौडाको चिसापानीमा वस्थ्यौ । वुवाले ठेकेदार पेशा गर्ने हुनाले वुवा प्राय घर वाहिर हुनु हुन्थ्यो । मेरो एक दाजु र ४ वहिनी थियो । मेरो दाजु र म भन्दा मुनीको वहिनी काठमाण्डौमा अध्ययन गर्ने गर्दथ्यो । घरमा मेरो आमा पछि ठुलो भनेकै म थिए । म १५ वर्षको भएकोले मेरो जवानी भर्खर आएको थियो । म प्रति सवैको नजर थियो । मेरो घरमा एक ट्याम्पु पनि थियो । सो ट्याम्पु चलकको आखा पनि मेरो जवानीमा अडिएको थियो । मलाइ थाहा थियो त्यो ट्याम्पु चालक मेरो जवानीको कारण हाम्रोमा काम गर्ने गरेको थियो । उ धेरैजसो हाम्रो घरमा नै हुने गर्थ्यो । उसले चलकको कामको साथसाथै घरको काममा पनि सघाउने गर्दथ्यो । यसै क्रममा एक दिन उसले मलाइ फिल्म हेर्न जाउँ भन्यो । म पनि के कम यहि मौका खोजी रहेको थिए । किनकी जवानीको कारण होला एक केटा साथीको खोजीमा थिए । हामी ओम हलमा फिल्म हेर्न गयौ । यसरी हामी विस्तारै नजिक हुँदै गएको मेरो आमाले सुइको पाएछ क्यार हामीलाइ वढि वुझ्न थाल्नु भएको थियो । एकदिन आमाले सो चालकलाइ यो महिना देखी काममा नराख्ने भनी जानकारी दियो र उसले आफ्नो हिसाव गरेर गयो । केहिदिन सो ट्याम्पु यतिकै घरमै रहयो । पछि अर्को चालकलाइ सो ट्याम्पु चलाउन दियो । सो नयाँ चालकले ट्याम्पु हाफ्नो जिम्मामा लिनु अगाडी ट्याम्पु सवै निरिक्षण गर्दा ट्याम्पुको सामान राख्ने स्थानमा एक पत्र भेटियो, सो पत्र मलाइ लेखिएको प्रेम पत्र रहेछ । आमालाइ आफुले शंका गरेको ठिक भएको अनुमान गर्नुभयो ।
मेरो जवानीको रंग चढ्दै गएकोले होला । मसंग स्कुल तथा छर छिमेकका केटा साथीहरु वढी हेलमेल गर्न थालेका थिए । यसैक्रममा म धेरै केटाहरु संग सम्वन्ध राख्ने क्रममा म पढ्ने स्कुलकै एक कमल नाम गरेका केटासंग वढि हेलमेल वढ्यो । यसैक्रममा हामी स्कुल छोडेर धेरै ठाउँमा घुम्न जान थाल्यौ कहिले फिल्म हेर्न, कहिले शहीदपार्क आदि स्थानमा जान थाल्यो । यसरी घुम्ने क्रममा एकान्त पाउना साथ कमलले मेरो गालामा म्वाइ खाने मेरो भर्खर उम्रदै गरेको दुध र मुन्टा मुसार्न भ्याइ हाल्थे । मेरो दुध मुसार्दा मलाइ रमाइलोको साथै पीडा हुने गर्दथ्यो । पीडा भन्दा मलाइ रमाइलो वढि लाग्ने गर्दथ्यो ।
एक दिन आमा काठमाण्डौमा दाजु र वहिनीको वारेमा वुझ्न जानु भयो । यो क्रममा घरमा हामीलाइ फुफाजुको जिम्मा लगाएर जानु भएको थियो । आमा करिव एक हप्ता जति नआउने पक्का थियो । फुफाजु गर्मी भएको कारण सधै माथी छटमा गएर सुत्नुहुन्थ्यो, हामी दिदीवहिनी भने तल कोठामै सुत्ने गथ्यौ । एक दिन मैले ठुलो आँट गरेर कमललाइ राती घरमा वोलाए । मेरो योजना अनुसार उ मेरो घरमा आयो । त्यो रात हामी संगै एउटै वेडमा सुत्यौ यो मेरो पहिलो कमल संगको सुताइ थियो । हामी वेडमा सुत्न त सुत्यौ तर रातभर निदाएनौ । हामी रातभर मडारी रह्यौ । कमलले मेरो कहिले दुधको मुन्टा चुस्ने त कहिले दुध मसार्ने गर्दथ्यौ । यसका साथ साथै हामी लामो समय सम्म मुखमुख जोडेर किस गर्यौ । अति भएर कमलले मेरो गाला वस्सरी टोक्यो । मैले वुझें म मात्र होइन कमल पनि उत्तेजनामा आइसको छभनेर । मैले पनि कमललाइ मज्जाले अंगालो हाले । त्यसपछि कमलले विस्तारै आफ्नो हातले मेरो नाइट ड्रेस माथी उचाल्यो र आफ्नो हात विस्तारै मेरो पेण्टी भित्र छिराउन थाल्यो र मेरो योनी चलाउन थाल्यो । उत राह्रै एक्र्सपर्ट जस्तो लाग्यो । मैले पनि आफ्नो हातले उसको पाइण्टको वटन खोले र पाइण्टवाट उस्को लिङ्ग चलाउनको लागि हात भित्र छिराए । हात भित्र छिराएर उसको लिङ्गके समातेको त लठ्ठीजस्तो साह्रो भएको रहेछ । एउटा अचम्मको कुरा उसको माल वरीपरी त कत्तिपनि रौनै रहेन छ । मेरो माल वरिपरी त एक वर्षअगाडीनै पुरा जंगल भैसकेको थियो । सायद म वाहुन जाती भएर चाँडै रौ आएको र उ वाहुन नभएकोले उसको रौ नआएको होला भन्नेथाने ।
हामी केही समय एक अर्काको लिङ्ग चलाउन ठाले पछि एक अर्का निर्वस्त्र भयौं र मेरो माथी कमल चढ्यो र मेरो मालमा कमलले आफ्नो माल राख्न थाल्यो । तर कमलले मेरो मालको प्वाल पत्ता लगाउन नै सकेन । यसपछि मलाइ थाहा भयो यो उस्को पहिलो सम्वन्ध रहेछ भनेर । मेरो पनि यो पहिलो सहवास थियो त्यहि भएर मैले केही वोलिन । धेरै वेरको प्रयास पछि वल्ल कमलले थाहा पायो प्वाल त एकदम तल दुइटा खुट्टाको काप्पामा हुन्छ भनेर । यो थाहा पाएपछि उसको माल मेरो माल भित्र विस्तारै विस्तारै चल्दै थियो । मेरो मालवाट पानी वगिरहेकोले होला स्वात्त भित्र छिर्यो । मलाइ डर लाग्यो र जवरजस्ती उस्को माल मेरो मालवाट वाहिर निकाले । हामीले कण्डमको प्रयोग नगरेकोले होला मेरो मालमा कमलको माल छिर्नासाथ वच्चा हुन्छ भनेर मैले उस्को माल मेरो मालवाट वाहिर निकालेको थिए । मलाइ कमलले धेरै वेर सम्झयो यसरी तिम्रो मालमा मेरो माल छिराउनासाथ वच्चा हुदैन, केहिवेर भित्रवाहिर गर्नुपर्छ तिम्रो मालमा मेरो माल अनि मेरो मालले तिम्रोमालमा भित्र वाहिर गर्दैगर्दा मेरो मालवाट सेतो पानि निस्कन्छ अनि मात्र वच्चा हुने हो यो मैले यस्तो निलो चलचित्रमा हेरेको छु भनेर धेरै सम्झायो कमलले मलाइ । मैले फेरी कमललाइ सोधे त्यो पानी मेरो माल भित्र फाल्यौ भने वच्चा भैलाल्छनी भने । कमलले म र्झनलाग्दा वाहिर निकाल्छु भनेर वाचा गर्यो । हामी उत्तेजनामा आइसकेकोले जसोस होस भन्ने लाग्यो र हामी फेरी चल्न तयार भयौ । यसपछि कमलले मेरो मालमा आफ्नो माल छिराएर करिव ५ मिनेट जति चल्यौ र उसको मालले पानी फ्याक्न थालेछ क्यार उसले मेरो मालवाट वाहिर निकाल्यो र मेरो पेटमाथी ओकल्यो । हामीले पहिलो पटक यौन सर्म्पर्क गरेर हो वा डरले हो चाँडै कमलको मालले पानी झार्यो । यसपछि हामी सिथिल भयौ । यति गर्दा गर्दै विहानको साढे चार वजिसकेछ । म हतार हतार लुगा लगाए र कमललाइ पनि लुगा लगाउन लगाए किनकी फुफाजु माथी छटमा सुत्नु भएको थियो उज्यालोमा कमललाइ देख्ला भनेर त्यहाँवाट भगाए ।
उज्यालो भएपछि हामी सधै झै नियमित कार्यका लागि खाना वनाएर खाना खाएर स्कुल गयौं । कमल पनि स्कुलमा भेटियो । मलाइ त्यो रातको क्रियाकलाप सपना जस्तो मात्र लागेको थियो । किनकी यो मेरो जीवनमा पहिलो पटक थियो । म दिनभर यहि तर्कनामा रहें । त्यस पछि मलाइ थाहा थियो आमा एकहप्ता पछी मात्र आउनु हुन्छ । त्यहि भएर मैले कमललाइ करिव ६ दिन सम्म घरमा नियमित राती वोलाए । नियमित यस्तो यौन कार्य गर्यौ । हाम्रो यौन कार्य पहिलो दिन भन्दा सहज हुदै गयो । दिन वित्दै जाँदा यौन सम्पर्क गर्न लामो समय खर्च गर्नु परेन । हामी चाडै चाडै सवैकार्य गर्न थाल्यो तर मेरो मालमा कमलको मालको भित्र वाहिर गर्ने खेलको समय भने ५ मिनेट वाट करिव आधा घण्टा सम्म हुन थाल्यो । हामीले सधै राति तिन पाटक यो खेल खेलेर सुत्न पनि भ्याउने समय पायौ र संगै सुत्ने पनि गर्यौ । यो कार्य हामी निरन्तर ६ दिन मेरो घरमा गर्यौ ।
यस्तो कार्यमा चाख वढेर होला हामी पछि हामी कापी कलम किन्ने पैसा मागेर खाजा खर्च मागेर जम्मा गरेर हामी सो पैसाले हेटौडाकेा सुरक्षित स्थानको खोजीमा विभिन्न होटलमा स्कुल नगै दिनभर वस्ने र यस्ता यौन कार्य गर्न थाल्यौ ।
यो कार्य एस.एल.सी. दिएर प्लस टु पढ्दा सम्म कमलसंग नियमित चल्यो । यो साह्रै अविस्मरणीय क्षण थियो त्यो मेरो पहिलो दिनको यौन सम्वन्ध थियो । हरेक मान्छेले आफ्नो पहिलो यौन सम्वन्ध कहिले विर्सदैन जस्तो लाग्छ मलाइ ।
उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक अर्कालाई चेतावनी दिइरहँदा उत्तर कोरीयाका जनताले दुई देशबीच चलिरहेको वाकयुद्धलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने खासै जनाकारी छैन।
किनभने किम जङ-अनले उनको जनतामाथि कडा पकड कायम गरेका छन् र सावधानीका साथ उत्तर कोरियाली जनताको बाहिरी संसारसँग हुने पहुँचमा नियन्त्रण गरेका छन्।
उत्तर कोरियालाई प्रायः एक्लिएको र २१औं शताब्दीसँग मेल नखाने भनिन्छ।
उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ र कतिपय त अनुमानमा पनि आधारित हुन्छन्।
तर यी सबले हामीलाई उत्तर कोरियाको जीवन बारे के भन्न सक्छ्न् त?
पारिवारिक वंश र प्रजातन्त्र
किम इल-सङले सन् १९४८ मा प्रभावकारितका साथ उत्तर कोरियाको स्थापना गरेका थिए र त्यससँगै बुवाबाट छोरामा सत्ता हस्तान्तरण हुने गरी परिवारिक वंशको आधारमा हुने शासनव्यवस्था पनि शुरुवात गरे।
यही अवधिमा दक्षिण कोरियाले ६ वटा गणतान्त्रिक शासन, एउटा क्रान्ति, केही ‘कू’ लगायत संक्रमणकाल पार गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावसम्म आइपुग्यो ।
दक्षिण कोरियामा हालसम्म १२ जना राष्ट्रपतिले १९ वटा कार्यकालको शासन गरे ।
मुश्किलले कोहीसँग मोबाइल छ
सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार, उत्तर कोरियामा ३० लाख र दक्षिण कोरियामा ५ करोड ८९ लाख मोबाइल ग्राहक छन्।
३० लाख मोबाइल फोन भनेको धेरै जस्तो देखिन सक्छ।
तर २ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको देशमा यो हरेक १० जनामा एक जनासँग मोबाइल फोन भएको जस्तो हो।
मोबाइलको अधिकांश प्रयोगकर्ताहरु राजधानी प्योङयाङमै केन्द्रित छन्।
उत्तर कोरियाको मोबाइल बजार सीमित छ तर बढ्दो छ।
कर्योलिङ्क त्यहाँको एकमात्र नेटवर्क हो।
शुरुमा इजिप्सियन टेलिफोन कम्पनी ओरास्क्रमसँगको साझेदारीमा यो स्थापना भएको थियो र लामो समयसम्म यो त्यहाँको एकमात्र विकल्प थियो।
तर सन् २०१५ मा ओरास्क्रमले उत्तर कोरियाले बेयोल नामको प्रतिद्वन्द्वी नेटवर्क बनाउन लागेको पत्ता लगायो।
र, लगानीकर्ताहरुलाई उसले ३० लाख ग्राहकमाथिको नियन्त्रण गुमाएको खुलासा गर्न बाध्य भयो।
ग्राहकहरुको संख्यामा शंका गर्न सक्ने कारण भने छ।
जन्स हप्किन्स् विश्वविद्यालयस्थित अमेरिका-कोरिया संस्थाले गरेको एक अध्ययनले उत्तर कोरियालीहरुले समय थप्नुभन्दा नयाँ ग्राहक बन्नु फाइदाजनक हुने हिसाब निकालेका कारण पनि मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको हुनसक्ने देखाएको छ।
मोबाइलको कमीबाहेक धेरै उत्तर कोरियालीहरुलाई राष्ट्रको ‘निजी इन्टरनेट’ मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ।
यो देशको निजी इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रव्यापी रुपमा संचालित सीमित स्थानीय नेटवर्कमा मात्र काम गर्न सक्ने इन्ट्रानेट हो।
सन् २०१६को एक प्रतिवेदनका अनुसार उत्तर कोरियामा जम्मा २८ वटा डोमेन दर्ता भएका छन्।
यो शहरतिरको कल्पितकथा जस्तो सुनिन सक्छ तर केही अध्ययनहरुले उत्तर कोरियाका पुरुषहरु औसतमा दक्षिणका भन्दा होचो हुने सुझाएका छन्।
सोलस्थित सुङकुन्वाङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानियल स्वेचवेकेनडिएकले उत्तर कोरियाली शरराणर्थीहरुले दक्षिण कोरियाको सीमा पार गर्दा उनीहरुको उचाइको अध्ययन गरेका थिए।
दुई कोरियाली मुलुकका पुरुषहरुको उचाइ औसतमा ३-८ सेन्टिमिटरको फरक रहेको पत्ता लगाएका थिए।
उनी उचाइमा भिन्नताको कारण वंशाणुगत हुन नसक्ने बताउँछन् किनकि दुवै जनसंख्या एकै हुन्।
खाद्यान्नको अभावका कारण नै सामान्यतयाः उत्तर कोरियालीहरु होचो हुनुको प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ।
उत्तर कोरियाका सडक खराब छन्
उत्तर कोरियाबाट देखाइने दृश्यहरुमा राजधानी प्योङयाङका सडकहरु चिल्ला र फराकिला हुने गर्छन्।
र त्यी सडक सवारीसाधनले टनाटन भरिएका पनि हुँदैनन्।
तर शहर बाहिरको कथा अर्कै छ।
सन् २००६ को आँकडाअनुसार उत्तर कोरियासँग करिब २५,५५४ किलोमिटर लामो सडक छ।
तर त्यसमध्ये जम्मा ३ प्रतिशतमा मात्र कालोपत्रे गरिएका छन्।
त्यस्तै हरेक हजार उत्तर कोरियालीमध्ये केवल ११ जनाको मात्र मोटरको स्वामित्व छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
यसको मतलब बस चढ्ने स्थानहरुमा यात्रुको लामो लाम हुने गर्दछ।
कोइला: उत्तरको प्रमुख आर्थिक आधार
उत्तर कोरिया उसको अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाउनका लागि कोइला निर्यातमै भर पर्छ तर यसको सही मापन गर्न गाह्रो छ, किनभने यसको तथ्याङ्क कोइला आयात गर्ने राष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुन्छ।
उत्तर कोरियाबाट धेरै कोइला चीन निर्यात हुन्छ, जसले सन् २०१७ फ्रेबुअरीदेखि उत्तर कोरियाबाट हुने आयात प्रतिबन्ध गर्‍यो।
यद्यपि केही विश्लेषकहरुले प्रतिबन्धको प्रकृतिमा प्रश्न गरेका छन्।
प्रिन्सटन इन्स्टिच्युट फर इन्टरन्यासनल इकोनोमिक्सका अध्ययन विश्लेषक केन्ट बोइडस्टन भन्छन्, “प्रतिबन्धपछि पनि उत्तर कोरियाली पानी जहाजहरु चीन बन्दरगाहको कोइला टर्मिनलमा रोकिएको देख्ने मानिसहरु छन्। म ठान्दछु चीनले कोइला आयात रोकेको छ तर पूर्ण रुपमा भने होइन,” ,
तर दुवै कोरियालीहरु योभन्दा धेरै मेल खाने गर्दथे
सन् १९७३ सम्म सम्पत्तिको आधारमा उत्तर र दक्षिण कोरिया निकै समान थिए।
त्यस यता दक्षिण कोरियाले ठूलै छलाङ् मार्‍यो र अहिले प्रमुख ‌औद्योगिक उत्पादक बनेको छ।
स्यामसङ र ह्युन्डे जस्ता उसका कम्पनी विश्वब्रान्ड बनेका छन्।
उत्तर कोरिया सन् १९८०को दशकदेखि स्थिर रह्यो जब ऊ कठोरताका साथ राज्यद्वारा संचालित प्रणालीमा अड्कियो।
जनसंख्याको आधारमा उत्तर कोरिया ५२औं ठूलो देश हो र ऊसँग विश्वकै चोथौ ठूलो सैनिक भएको ठानिन्छ।
उत्तर कोरियामा सैनिकमाथि राज्यको कुल गार्ह्रस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको अनुमान गरिएको छ।
र हरेक उत्तर कोरियाली पुरुषले कुनै न कुनै किसिमको सैन्य प्रशिक्षण गरेकै हुन्छ।
दक्षिण कोरियालीहरु बढी बाँच्दछन्
सन् १९९० ताका भएका श्रृङखलाबद्भ भोकमरीका कारण उत्तर कोरियालीहरुको ‍औसत आयु स्वात्तै घट्यो।
तर यो कारण बाहेक पनि उत्तर कोरियालीहरुको औसत आयु करिब १२ वर्ष कम छ।
उत्तर कोरियामा खाद्यान्नको अभाव छ र दक्षिण कोरियालीहरु उनीहरु भन्दा बढी बाँच्नुको पछाडिका अन्य थुप्रै कारणहरु मध्यै यो पनि एक हो।
….तर उत्तर कोरियालीहरुले धेरै बच्चा जन्माउँछन्
सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाको जन्मदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम थियो।
दशकयता उसले घट्दो जन्मदर बढाउन संघर्ष गरिरहेको छ।
बच्चाले पाउने सुविधा, बच्चाको जन्मपछि बाबुआमाले पाउने बिदा लगायतका अन्य सुविधा र बाँझोपनको उपचारका लागि दक्षिण कोरियाले करिब ७० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ।